रेडियोमा भारतीय र चाइनीज गीत #ठट्टा
Green Card (पर्मानेन्ट रेजिडेन्स)
YouTube यात्रा #nepalisongs
आउ खेलौँ होली #Holi
फर्कदा 'लुक्स' तिल चामल भइसकेको थियो। १८ वर्ष छोटो अवधि होइन। जाँदा झोला दुई वटा थिए, फर्कदा एउटा मात्र। जाँदा सपरिवार बिदा गर्न आएका थिए। फर्कदा बिरानो झै लाग्ने शहरले नचिने झैं गरिरहेको थियो। त्यतिबेला मेरो मनोदशा दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मन फौजको सिपाही मस्कोबाट बर्लिन फर्केको जस्तो थियो। संसार जित्न हिँडेको म सबैथोक हारेर आफ्नै ‘बलिर्न' फर्कदै थिएँ। जुनसुकै युद्धमा होस् जीवन हार्नेहरुले सम्मानित स्थान पाउँछन् तर जीवनमा हार्नेहरुलाई सहिदको सम्मान प्राप्त गर्ने सौभाग्य हुँदैन। मैले त्यसदिन आफूलाई जर्मन सिपाही जस्तै अभागी अनुभव गरेँ।
हामी दुई दाजुभाइ थियौ। तर, दाइलाई मैले आउँदै छु भनेर खबर गरेको थिइनँ।।हाम्रो कुराकानी नभएको वर्षौं भइसकेको थियो। दाइको घरको मूलगेटको घण्टी बजाउनु केहीबेर अघिसम्म पनि हाम्रो अंशबण्डा नभएको तर्क अथवा इगोबाहेक उसलाई भेट्ने भावनात्मक उत्सुकता र प्रेम थिएन।
१८ वर्षको वनबासपछि पनि हाम्रो पुनर्मिलन राम र भरतको जस्तो नहुने निश्चित नै थियो। संवेदना र भावनालाई जोगाउन नसकेकोमा आफै देखेर आफै अचम्भित भएँ।
घण्टी बजाएको एकछिनमा ढोका खोल्न एउटी महिला आइन्। ढोका आधा खोलेर चियाइन्। दाइकी श्रीमती होलिन्– भाउजू!
उनीहरुप्रति मनमा सम्मान बाँकि थिएन। त्यसैले शिष्टाचारको औपचारिकता पूरा नगरी सोधें–राम छ?
‘तपाईं को?' उनले पनि ठाडै सोधिन्।
‘भाइ', मैले आवश्यकता भन्दा एक शब्द पनि बढी बोलिनँ।
‘को भाइ?’, उनले फेरि सोधिन्।
जब पश्चिम आबाज लिएर निश्कन्छ, केन्द्र बन्दुक बोकेर पूग्छ। तर पश्चिमलाई सहयोगको खांचो पर्दा काठमाण्डौ सिरक ओडेर सुत्छ। यसै प्रसंगमा सुन्नुहोला (हेर्नुहोला) एउटा मुटु छुने गित।
देश विदेश जताततै
यो कस्तो उमंग
आयो फागुन होलीको
मौसम नै मज्जा आनन्द
कुरा के भन्ने खै, कुरो त्यही हो, प्रिन्श् ह्यारीको नेपाल भ्रमाण बारे। गाउंको जोगी गिद्द अन्तको जोगी सिद्द। कुरो आफै मिलाएर बुझौं, केही भए तल कमेन्ट बक्समा राखौ.